: Ahoana no hividianana?
A: 1. Voalohany indrindra, araky ny fampidirana ny vokatra, azafady mba lazao anay hoe inona ny vokatra tianao, ary andramo milaza aminay ny tontolo manodidina anao sy ny fepetra takiana hampiasanao.
2. Ny mpiasan'ny varotra ataontsika dia hanome soso-kevitra ny fikirakirana vokatra sahaza ho anao arakaraka ny zavatra takinao, toy ny firenena eropeana mila fanamafisana ny EU, tsy maintsy manolotra vokatra miaraka amin'ny fanamarinana CE izahay, Etazonia dia manana fepetra takian'ny fiarovana ny tontolo iainana ho an'ny mpanjifa, hatolotray ny EPA vokatra, ary ny firenena sasany dia tsy manana fepetra takiana manokana, dia hanoro hevitra ireo vokatra mahomby izahay.
3. Ny mpanjifa dia afaka mametraka ny fepetra takiana manokana ihany koa, toy ny fanoloana ny làlam-by, ny fanoloana ny motera Yanmar Japoney, ny sandan'ny swing swing, ny fametrahana ny aircondition ary ny fepetra hafa manokana.
4. Aorian'ny fahafaham-po ny fepetra takiana rehetra, azafady ampahafantaro anay ny haben'ny filaminana, ny fomba fandoavam-bola, ny mpandray, ny fampahalalana amin'ny seranana. Matetika izahay dia mitaky fandoavana 30% ary 70% alohan'ny fandefasana.
5. Nanao sonia ny fifanarahana, nanomboka ny famokarana taorian'ny nahazoana ny vola mialoha, ary nanomboka ny fonosana sy ny fandefasana rehefa nahazo fandoavam-bola.
6. Mahazo ny vokatra ny mpanjifa ary manomboka mampiasa izany.Halefanay amin'ny mpanjifa ny torolàlana momba ny fandidiana amin'ny antsipirihany sy ny boky fikojakojana, ny mpanjifa dia tsy mila miahiahy momba ny fampiasana ny olana.
7. Ny ampahany lehibe amin'ny vokatra (motera, motera, rafitra hydraulic) dia azo antoka mandritra ny herintaona, ary hosoloinay maimaim-poana ny ampahany amin'ireo ampahany lehibe.
: Ahoana ny fomba hahazoana ny milina mety indrindra sy ny vidiny tsara indrindra?
A: 1) Serivisy alohan'ny varotra: afaka manampy anao izahay hahita ny fitaovana mety mifanaraka amin'ny zavatra takinao.
2) Serivisy an-tsena: manaraka tsara ny lalàna mifehy ny varotra izahay, manasonia fifanarahana, manaraka ny fizotry ny famokarana, mifehy ny kalitaon'ny entana, manara-maso ny fandefasana entana, manome antoka anao handray soa aman-tsara ireo entana mendrika.
3) Serivisy aorian'ny fivarotana: manome sasantsasany amin'ny fitaovana izahay, toy ny kitapo fitaovana.
Manana boky torolàlana momba ny fampandehanana ny fametrahana sy ny fiasa fototra izahay; torolàlana momba ny fitifirana olana; injeniera vonona amin'ny fikojakojana ny saha sy ny fanamboarana rehefa ilaina.
: Manana ny bokin'ny masinina ve ianao?
A: Eny, afaka manome rindrambaiko manual, CD izahay ary mametraka horonan-tsary hanampiana anao hampiasa ny masinina amin'ny fomba miavaka.
: Raha tsy mahay mampiasa ny masinina izahay dia afaka mampianatra anay ve ianao?
A: Eny Mazava ho azy. Afaka manolotra fiofanana maimaimpoana ho anao sy injeniera azonao ampiasaina amin'ny fiofanana momba ny milina serivisy any ampitan-dranomasina izahay raha te hanolotra fandaniam-bola ho azy ireo.
: Ahoana ny serivisinao aorian'ny varotra?
A: Manolotra serivisy aorian'ny fivarotana matihanina sy ara-potoana, serivisy an-tserasera 24 ora amin'ny alàlan'ny telefaona, skype ary whatsapp.
: Ahoana ny fe-potoana fiantohana anao?
A: Manome antoka kalitao iray taona izahay ho an'ny ampahany lehibe.
: Inona ny vanim-potoana fanaterana?
A: Rehefa avy nahazo ny fandoavam-bola voalohany dia ho vonona ny entana ho entina ao anatin'ny 5 andro. Ny fotoana fitsaharana dia miankina amin'ny fomba lavitra sy fomba fitaterana izay mila ifampiraharahana.
: Inona avy ireo fepetra fandoavam-bola azonao ekena?
A: 30% fandoavam-bola voalohany, fandoavam-bola 70% rehefa vonona ny handefa ny entana amin'ny alàlan'ny T / T.
: Azontsika atao ve ny manana kaomandy manokana toy ny fanovana famaritana, fananganana logo?
A: Eny, ekenay ny fanaingoana. Azontsika atao ny manazava izany amin'ny fifanarahana ary avy eo ny famolavolana sy ny famokarana teknika fanombohana araka ny takinao.